Xog- Puntland oo Itoobiya ku wareejinaysa Qaar ka mid ah Maxaabiista Alshabab – Ogadentoday Press- Ogaden News, Ethiopia and Somalia
Xog- Puntland oo Itoobiya ku wareejinaysa Qaar ka mid ah Maxaabiista Alshabab
Written by admin, Mar 26, 2016, 0 Comments	0
Follow XOG HALIS AH: P/land & Ethiopia oo ku heshiiyay Maxaabiista lagu qabtay Dagaalka + Qorsho cusub oo socda
Warar hoose oo aan ka helnay ilo wareedyo lagu kalsoon yahay kana tirsan maamulka Puntland ayaa sheegaya in maamulka uu wado qorsho ka dhan ah maleeshiyaadkii lagu qabtay dagaalka u dhexeeyay Ciidamada Puntland iyo maleeshiyaadka Al-shabaab.
Ilo wareedka ayaa xaqiijiyay in maamulka Puntland uu laba dhan u kala sifeynaayo maleeshiyaadkii lagu qabtay Dagaalka kuwaasi oo qaarkood lagu wareejin doono Dowlada Ethiopia, halka qaarna ay Puntland u sameyn doonto dhaqan celin.
Maleeshiyaadka ay Puntland ku wareejin doonto Dowlada Ethiopia ayaa ah kuwa ay da’doodu u dhexeyso 20 ilaa 50, halka kuwa ay da’ doodu u dhexeyso 10 ilaa 20 gudaha Puntland loogu sameyn doono dhaqan celin.
Ilo wareedka ayaa sheegaya in heshiiska lagu wareejinaayo Maxaabiistaasi uu dhacay taariikhdu marka ay aheyd March 20, 2016 kaasi oo ka dhacay magaalada Addis Ababa ee xarunta Dowlada Ethiopia.
Heshiiska ayaa waxa uu si gaar ah uga dhacay dhismaha Wasaarada Arrimaha Dibadda dalka Ethiopia, waxa uuna heshiiskaasi ahaa mid dhigaaya inaan DFS loo gacan-galin karin Maxaabiistaasi.
Ujeedka laga leeyahay Maxaabiistaasi ayaa ah in Dowlada Ethiopia ay si gaar ah ugu adeegato, iyada oo u isticmaaleysa xogaha ku aadan xarumaha laga soo tashkiiliyay iyo kuwa ay ku dhuuntaan maleeshiyaadka.
Geesta kale, cabsida ugu weyn ayaa ah in Ethiopia qudheeda ay Maxaabiistaasi u gacangaliso Saraakiisha Reer galbeedka ka jooga Africa.